Wednesday May 17, 2017 - 08:37:09 in Wararka by Super Admin
Taageerayaasha Jamaacaadka Jihaadiga ah iyo Mufakiriin kasoo horjeedo siyaasadaha dowladaha carabta iyo Reer Galbeedka ayaa isweydiiyay sababta Trump uu u hoggaamin doono shir loogu magac daray shirka 'Mareykanka iyo dowladaha islaamika&Carabta' oo 21,May,2017 ka furmaya magalada Riyadh ee dalka Saudi Arabia.
Xukuumadda Sacuudiga ayaa wadda diyaar garoowgii ugu dambeeyay oo ay ku qabanayso shir u dhaxeeya mareykanka iyo dowladaha dabadhilifyada ah ee kajira caalamka islaamka.
Salmaan Bin C/caziiz hoggaamiyaha Aala sacuud ayaa sheegay in wadankiisu udiyaar garoowbay shir ballaaran oo ka dhan ah jamaacaadka jihaadiga ah laguna kordhinayo faafinta waxa loogu yeero dimuquraadiyadda ee lagu fasahaadinayo dhaqanka dadka muslimiinta.
Aala sacuud ayaa nasiib uyeelanaysa in ay martigeliso safarkii ugu horreeyay ee uu dibadda ku aado Donald Trump hoggaamiyaha cunsuriga mareykanka, wasiirka arrimaha dibadda aala sacuud Caadil bin jubeyr ayaa warbaahinta u sheegay in xukuumaddiisu ay qaban doonto sedax shir oo dhammaantood ka dhan ah waxa uu ugu yeeray ladagaallanka argagaxisada iyo xadeynta xagjirnimada oo ay ula jeedaan in dhalinyarada muslimiinta laga weeciyo wadada saxda ah ee faraysa jihaadka iyo wax iska caabinta.
Caadil aljubeyr ayaa casuumaado kala duwan udiray in kabadan 12 hoggaamiye oo kajira wadamada carabta iyo caalamka islaamka waxaana kamid ah Max’med Cabdullaahi farmaajo hoggaamiyaha dowladda Federaalka Soomaaliya.
Trump ayaa marka uu tago magaalada Riyaad wxuu kulamo layeelan doonaa intabadan hogaamiyaasha dowladaha khaliijka ee lixda ah iyo hoggaamiyaal kale oo reergalbeedka wakiilo uga ah wadamada caalamka islaamka.
Wakaaladda wararka sacuudiga ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaan WAAS ayaa sheegtay in Salmaan Bin Cabdi Caziiz uu ku faanayo qaban qaabinta shir uu ugu magac daray shirka mareykanka,carabta iyo caalamka islaamka, "waxaa farxad noo ah in aan aas-aasno oo aan dhidibada utaagno shirka taariikhiga ah ee shurakada cusub ee ka dhanka ah argagaxisada, iyo in aan faafinta mabda’a wada noolaashiyaha iyo tasaamuxa diimaha” sidaas waxaa yiri Boqorka Aala sacuud oo u warramay wakaaladda WAAS.
la taliyaha amniga qaranka Trump ayaa isna laba maalmood ka hor sheegay in 21-ka bishan May uu shir muhiim ah Mareykanku uga qeyb geli doono magaalada Riyadh, falanqeeyayaal ayaa sheegaya in shirkaan uu yahay mid dowladda Mareykanku ay kula xisaabtameyso wakiiladeeda caalamka islaamka gaar ahaan dowladaha khaliijka oo ilaalinta amnigooda mareykanku dhaqaale mug leh uga doonayo.
Trump ayaa xilligii uu utartamayay doorashooyinka wuxuu wacad ku maray in dowladaha khaliijka sida Kuwait iyo sacuudiga uu lacago qaansheegad ah si sandulle ah uga qaadi doono haddii kale aysan damaanad qaadi doonin sugidda amnigooda.
Sanaddii 2009 ayuu Brack Obama Madaxweynihii hore ee Mareykanka Khudbad ka Jeediyay Jaamacadda Magaalada Alqaahira waxayna aheyd booqashadii ugu horraysay ee uu dibadda ku aaday.
Trump isna waxaa lafilayaa in uu jeediyo Khudbad uu uga hadlayo arrimaha Islaamka!, wuxuu sheegi doonaa in islaamku uu ka dhan yahay jamaacaadka Jihaadiga ah ee reergalbeedku Argagaxiso u yaqaanaan.
Wadaado xumayaasha dowladaha carabta u fatwooda ayuu Trump uga dayanayaa ceebeynta iyo wax ka sheegidda xoogaga islaamiga ah ee caalamka ka dagaallama